Tababare Mikel Arteta Oo Afka Furtay: “Xaq Baad U Leedihiin Inaad I Karbaashtaan | Kaafi News
Tababare Mikel Arteta Oo Afka Furtay: “Xaq Baad U Leedihiin Inaad I Karbaashtaan
December 16, 2020 - Written by admin
Mikel Arteta ayaa sheegay in dadka dhalleecaynaya ay xaq u leeyihiin inay karbaashaan maadaama kooxdiisu ay guulo keeni kari la’dahay, waxaana uu xiddigihiisa usoo jeediyey inay geesinimo muujiyeen oo ay waji ahaan iyo jidh ahaanba dib ugu soo laabtaan dariiqa guusha.
Arsenal ayaa shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey afar ka mid ah laga badiyey, waxaanay ku jirtaa kaalinta 15aad iyadoo ku jirta marxaladdii ugu xumayd muddo 46 sannadood ah.
Mikel Arteta oo warbaahinta la hadlay ka hor ciyaarta ay Southampton ku ballansan yihiin ayaa yidhi: “Waqtigan, waan ka xumahay laakiin rasaasta ayaanu qaadan karnaa.
“Inaanu hoos uga sii dhacno miiska kala-sarrayntu maaha xaaladdii aanu doonaynay, laakiin tani waa xaqiiqadayada waqtigan waana inaanu waajahno.
“Waa inaanu ku waajahno geesinimo, dagaal iyo in aanu qofna is-dhiibin ama aan waxba laga joogsan.
“Maaha waqtigii wax la qarin lahaa, waa waqtigii aad wajiga dhigan lahayd iyo jidhkaba laynka dushiisa.”
Mikel Arteta oo tababarenimada Arsenal la wareegay December 2019 oo uu beddelay Unai Emery oo shaqada laga caydhiyey, waxa uu ku adkaystay inuu qaadanayo masuuliyadda guul-darrooyinka, waxaanu yidhi: “Kuma guuleysanayno kulamadayada kubadda cagta, aniga ayaana xabbadka u dhiganaya guul-darrooyinka, waana inaad i garaacdaan.
“Xaq ayaad u leedihiin inaad i garaacdaan, sababtoo ah ma guuleysanayo. Maxaa kale ee aan samayn lahaa? Waa inaan madaxa dhigto, si adag u shaqeeyo, iskuna dayo inaan u shaqeeyo si wanaagsan oo horumar ah.”
Dhalleecaynta kaga imanaysa halyeeyadii hore ee kooxda, warbaahinta iyo taageereyaasha ayuu iyadna ka hadlay, waxaanu ydihi: “Waa wax dabiici ah. Waana inaan aqbalo dhalleecaynta, shaqada ayaanay ka mid tahay.”
Copyright © 2012 - 2021 kaafinews.com ®All rights reserved.